Akụkọ - Mmejọ nke ákwà ga-eleba anya Ⅰ
Nkwarụ akwa iji lelee anya Ⅰ
Nyocha nke ákwà bụ nzọụkwụ dị mkpa mgbe ị na-emepụta uwe, yana ihe dị mkpa maka QC.
N'okpuru ebe a bụ nkọwa ntụpọ 3 akwa iji lelee anya n'oge nyocha akwa.
A na-akọwa ntụpọ ákwà a site na ahịrị na-adịghị mma nke na-esi n'akụkụ ruo n'akụkụ.
Ihe kpatara ahịrị kwụ ọtọ bụ:
Mmejọ dị na bobbin (gbọmgbọm a na-ejigide yarn n'ebe)
Esemokwu erighị oge
Ihe na-akpata na mgbochi nke ahịrị kwụ ọtọ
Igbochi ọdịdị nke ahịrị kwụ ọtọ na akwa bụ ihe kwụ ọtọ. Dochie bobbin mgbe niile wee lelee esemokwu na ọnọdụ eri.
2.SHADE dị iche iche
Otu n'ime ntụpọ ọhụụ pụtara ìhè nke enwere ike ịhụ na akwa akwa, a na-akọwa mgbanwe ndo site na ọdịiche dị na omimi nke ndò na agba site na mpịakọta gaa na mpịakọta ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. A na-akpata mgbanwe ndo na akwa ákwà
Ngwakọta akwa eji eme ihe
Ọdịiche dị na usoro mmepụta ihe gbasara oge na ọsọ
Mbelata, nchikota na/ma ọ bụ ọnụọgụ na-ezighi ezi
Mgbatị akwa na-enweghị nha nha
Ihe na-akpata na mgbochi nke mgbanwe ndo
Iji otu ihe ntọala ahụ na setịpụrụ parampat maka ọtụtụ mmepụta ọ bụla nwere ike igbochi mgbanwe ndo nke ọma.
Mgbe ị na-eleta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụpụta akwa akwa, ọ dị oke mkpa ịhụ na ndị ọrụ na-ejikọta naanị uwe nwere otu agba na anaghị ewere ụzọ mkpirisi mgbe ha na-egbutu ma na-ekekọta. Ịgụ ụdị textiles ọnụ nke ọma na-egbochi ihie ụzọ ijikọta mbelata dị iche iche na ndò.
Unyi na-adịkarị n'etiti textiles agbajiri agbaji ma kọwaa ya dị ka ntụpọ ma ọ bụ patches nke agba dị iche. Textiles bụ Ọ dịghị mgbe n'ezie nchebe pụọ na ntụpọ n'ihi na ha nwere ike ime n'oge ọ bụla n'oge ma ọ bụ mgbe emechara ma ọ bụrụ na edoghị ha na mpaghara nwere nchebe zuru oke.